Iingcaphuno zikaJohn Templeton: Ezona zilungileyo zi-9, iBiografi kunye neSiseko seTempleton | Ezezimali
Iingcaphuno zikaJohn Templeton
IClaudi Casal | 25/09/2021 10:21 | Uqoqosho ngokubanzi
Ukuba inye into icacile, kukuba indlela yentengiso kunye neemvakalelo zabantu zinxulumene ngokusondeleyo. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba uninzi lwabatyali zimali olukhulu baphinde bafunde umntu kunye nemibuzo ebalulekileyo yobomi, enje ngobubele kuJohn Templeton. Lo waseMelika wayenomdla kakhulu kwisayensi nakwindalo iphela, nkqu nokwenza esakhe isiseko Ukuxhasa ngemali izifundo ezinxulumene nemibuzo ebalulekileyo yobomi. Ngesi sizathu nangobulumko bakhe obukhulu, amabinzana kaJohn Templeton ayacetyiswa kakhulu.
Ngaphandle koluhlu lwamabinzana alithoba alungileyo alo mtyali mali waseMelika kunye nesisa, siza kuphinda sithethe kancinci malunga nokuba ngubani le ndoda kunye nesiseko asenzileyo.
1 Ezona binzana zili-9 zibalaseleyo zikaJohn Templeton
2 Wayengubani uJohn Templeton?
3 Isiseko sikaJohn Templeton
Ezona binzana zili-9 zibalaseleyo zikaJohn Templeton
Ngaphambi kokuthetha ngale ndoda ibalaseleyo, Masidwelise intsimbi yethoba Ezona binzana zibalaseleyo zikaJohn Templeton. Ke unokufumana umbono wokuba lo mtyali mali wayenjani kwaye wayecinga njani.
Ndacinga ukuba ndiza kuba kule planethi kube kanye, kwaye okwexeshana nje. Ndingenza ntoni ngobomi bam nto leyo eya kukhokelela kwinzuzo engapheliyo? "
"Abo bachitha imali eninzi kakhulu baya kuba yipropati yabo banobutyebi."
"Ndiqinisekile ukuba inzala yethu, kungaphelanga inkulungwane okanye ezimbini, izakusibona kwakhona sinosizi olufanayo nolwabantu esiye bazinikezela kwinzululwazi."
«Amagama amane abiza kakhulu kulwimi lwesiNgesi Eli xesha lahlukile. "
"Masinqule oothixo, kodwa masiqonde ukuba ubuthixo esibunqulayo bungaphaya kokuqonda kwethu."
"Sebenzela ukuba ngumntu othobekileyo."
"Imigaqo emikhulu yokuziphatha kunye nenkolo sisiseko sempumelelo kunye nolonwabo kuzo zonke iindawo zobomi."
"Iimarike ze-Bull zizalwa ngenxa yokuphelelwa lithemba, zikhule ngokuthandabuza, zivuthwe kwithemba, kwaye zife kwimincili."
"Ngoku ndigxile kubutyebi bokomoya, kwaye ndixakekile, ndinomdla kwaye ndonwabile kunangaphambili."
Wayengubani uJohn Templeton?
Ngo-1912 ophambili, uJohn Templeton, wazalelwa kwidolophana encinci eMelika ebizwa ngokuba yiWinchester. Wayengunyana wosapho lwamaRhabe kunye nomfana wokuqala edolophini ukuya ekholejini. Kufuneka iqatshelwe ukuba ayiyanga kuphela eyunivesithi yodumo, iYale, kodwa wayengomnye wabokuqala kwiklasi yakhe. Ukuqala ngo-1937, waqala umsebenzi wakhe eWall Street, efumana amava amaninzi kunye nokuqokelela ubulumko obubonakaliswa kumabinzana kaJohn Templeton.
Icebo lakhe lotyalo mali lalisisiseko: Thenga iphantsi kwaye uthengise phezulu. Ngo-1954, lo mtyali-mali wenza "i-Templeton Funds", ingxowa-mali eyalandela iqhinga lokwahlukahlukana kunye nehlabathi. Oku kwenza ukuba u-Templeton abe nguvulindlela kulawulo lwengxowa mali.
UJohn Templeton wagqibela ngokuyeka ubuzwe bakhe baseMelika ukuba bamkele iBritane. Emva kwexesha wazinza eBahamas, indawo eyaziwayo yerhafu. Zombini izigqibo ziye zaphumelela kakhulu kwinqanaba lerhafu. Ngokwale magazini imaliUJohn Templeton wayengoyena mntu "okhethe isitokhwe kwihlabathi lonke ngekhulu lama-XNUMX." Nangona kunjalo, isimilo sakhe sobubele sasiya sifumana ukwanda ngakumbi nangakumbi. Wagqiba ukuthengisa "i-Templeton Funds" nge-440 yezigidi zeedola, efikelela irekhodi eliphezulu kwinkampani enjalo.
Impumelelo yakhe enkulu njenge-philanthropist yachukumisa u-Queen Elizabeth II, wamthiya igama lokuba nguKnight woBukhosi baseBritane. Yile ndlela waba ngayo uSir John Templeton. Nangona kunjalo, uqhubeke nokuphila ngendlela ethobekileyo kwaye ethozamileyo. Usweleke eneminyaka engama-95 eNassau, eBahamas.
Njengoko kunokulindelwa, ayisiyiyo kuphela amabinzana kaJohn Templeton ashiye ubulumko babo obubhaliweyo, ukuba ayilulo uthotho lweencwadi awazipapashayo ebomini bakhe. Siza kudwelisa apha ngezantsi, ngokulandelelana kwazo kunye nesihloko sabo sokuqala ngesiNgesi:
1981: Indlela ethobekileyo: Izazinzulu ziyamfumanisa uThixo
1992: Isicwangciso seTempleton: Amanyathelo angama-21 okuPhumelela buqu kunye nolonwabo lokwenene
1994: Ngaba uThixo kuphela koKwenene? Inzululwazi isalathisa kwiNtsingiselo enzulu yoMhlaba
1994: Ukufumanisa iMithetho yoBomi
1997: IiNiggets zeGolide ezivela kuSir John Templeton
2005: Imali ethembekileyo 101: Ukusuka kwiNtlupheko yoloyiko kunye nokubawa kubutyebi bobutyebi bokomoya
2006: Ubutyebi beNgqondo noMoya: UJohn Marks Templeton kaNondyebo waMazwi wokuNceda, ukukhuthaza kunye nokuPhila
Ngokuphathelele kuhlelo lweSpanish, inye kuphela ukusuka ku-2004, enesihloko Ibali lembumbulu: intsomi yobulumko kunye nokuzazi.
Isiseko sikaJohn Templeton
Ngaphandle kwamabinzana amakhulu kaJohn Templeton, Le philanthropist nayo yashiya isiseko esabizwa ngegama lakhe. Okwangoku, umongameli wale siseko ngunyana wakhe: UJohn M. Templeton Jr. nangona igama layo lingu "John Templeton Foundation," yaziwa ngokubanzi njenge "Templeton Foundation."
Ngokusisiseko injongo yakhe kukusebenza njengoluhlobo lwe-catalyst of philanthropic kwaye ke khuthaza ukufumanisa okutsha okunxulumene nemibuzo ebalulekileyo yobomi:
Ngaba imali iza kusombulula iingxaki zophuhliso e-Afrika?
Ngaba uMhlaba unento?
Ngaba imakethi yasimahla iyonakalisa isimilo?
Ngaba inzululwazi iphelelwa lixesha?
Ngaba Indaleko Iyabuchaza Ubume Bomntu?
Njengoko ubona, le mibuzo igubungela imixholo eyahlukeneyo, ukusuka kwimithetho yendalo yonke kunye nendalo, kwimpembelelo yentengiso, yentengiso yemasheya okanye imali ebantwini. Esi siseko sizalwe ngokuzinikela kukaSir John Templeton kuphando lwezesayensi. Imotto ithi "Kuncinci kangakanani esikwaziyo, indlela ekufuneka sikulangazelele ngayo ukufunda", Oko kuthetha ukuba wayenethemba lokufaka isandla ngale ndlela kwinkqubela phambili yoluntu lonke ngokufumanisa izinto ezifanelekileyo.
Isiseko sikaJohn Templeton igubungela iindawo ezininzi ngokwemali, esiza kudwelisa ngoku:
Inzululwazi kunye nemibuzo emikhulu: Inzululwazi yemvelo kunye nemathematika, isayensi yobomi, isayensi yabantu, ifilosofi kunye netheology, isayensi kwincoko.
Inkululeko kunye nenkululeko
Iitalente ezikhethekileyo zokuqonda kunye nobuchule
Kucacile ukuba amabinzana kaJohn Templeton enza ukuba umntu angabonisi uqoqosho kuphela, kodwa nakubantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Iingcaphuno zikaJohn Templeton
Yintoni intengiso eqhubekayo